Asian Traveler: မြန်မာ့လေကြောင်းလိုင်း၏ နိုင်ငံတကာ ခရီးစဉ်များ ပြန်လည်ပြေးဆွဲနိုင်ရန် ဆောင်ရွက်သွားမည်
မြန်မာ့လေကြောင်းလိုင်း၏ နိုင်ငံတကာ ခရီးစဉ်များ ပြန်လည်ပြေးဆွဲနိုင်ရန် ဆောင်ရွက်သွားမည်
ပြည်တွင်းခရီးစဉ်များသာ ပျံသန်းနေသော နိုင်ငံပိုင် မြန်မာ့လေကြောင်းလိုင်း၏ နိုင်ငံတကာ ခရီးစဉ်များ ပြန်လည်ပြေးဆွဲနိုင်ရန် ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်းနှင့် စတင်တည်ထောင်ခဲ့စဉ်က တိုက်ရိုက်ပျံသန်းရန် ၀န်ဆောင်မှုပေးနိုင်ခဲ့သည့် အင်္ဂလန်၊ ပြင်သစ်၊ ဂျာမနီကဲ့ သို့သော နိုင်ငံတကာ လေကြောင်းခရီးစဉ်များ ကို ပြန်လည်ပြေးဆွဲနိုင်ရန် ဆောင်ရွက်သွားမည်ဟု မြန်မာ့လေကြောင်းတာဝန်ရှိသူ တစ်ဦးထံမှ သတင်းရရှိပါသည်။
Union of Burma Airways (UBA) အမည်ဖြင့် ၁၉၄၈ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလ ၁၅ ရက်နေ့တွင် စတင်ဖွဲ့စည်းခဲ့သော မြန်မာ့လေကြောင်းလိုင်းသည် ၂၀၁၀ ပြည့်နှစ် စက်တင်ဘာလ ၁၅ ရက်နေ့တွင် (၆၂)နှစ်ပြည့်မြောက်ပြီ ဖြစ်သည်နှင့်အညီ ယခုထက် ပိုမိုတိုးတက်သည့် ၀န်ဆောင်မှုများပေးနိုင်ရန် ရည်ရွယ် ဆောင်ရွက်သွားမည် ဖြစ်ကြောင်း သိရှိရသည်။
UBA မှBAC ( Burma Airways Corporation) ထိုမှ Myanmar Airways အမည်ဖြင့် ဖြစ်ပေါ်လာသော မြန်မာ့လေကြောင်းလိုင်းသည် လက်ရှိတွင် မန္တလေး၊ နေပြည်တော်၊ ကလေး၊ ခန္တီး၊ မိုင်းဆတ်၊ ဟုမ္မလင်း၊ ပူတာအို စသည်ဖြင့်မြို့ပေါင်း ၂၅ မြို့ကို ပြည်တွင်း ခရီးစဉ်များအဖြစ် ပြေးဆွဲပေးလျက်ရှိကြောင်း သိရှိရသည်။
မြန်မာ့လေကြောင်းလိုင်းသည် စတင်ပျံသန်းချိန်တွင် ပြည်တွင်းခရီးစဉ်များကို ပြေးဆွဲပေးခဲ့ပြီး ၁၉၅၀ ပြည့်နှစ်တွင် ဘန်ကောက်၊ ကာလကတ္တားနှင့် စစ်တကောင်းမြို့များသို့ လည်းကောင်း၊ ၁၉၅၃ ခုနှစ်တွင် ပီနန်၊ စင်ကာပူနှင့် ခတ္တမန္ဒူမြို့များသို့ လည်းကောင်း ဒေသတွင်း နိုင်ငံတကာခရီးစဉ်အဖြစ် တိုးချဲ့ပျံသန်းခဲ့ကြောင်း သိရသည်။ BAC အမည်သို့ ၁၉၇၄ခုနှစ်တွင် ပြောင်းလဲခဲ့ပြီး ၁၉၈၉ခုနှစ်တွင် MA (မြန်မာ့လေကြောင်း) အဖြစ်ထပ်မံ ပြောင်းလဲကာ ဘန်ကောက်၊ စင်ကာ ပူ၊ ဒက္ကား၊ ခတ္တမန္ဒူ၊ ဟောင်ကောင် နှင့်ဂျာကာတာ ခရီးစဉ်များကို ၁၉၉၃ ခုနှစ် သြဂုတ်လ ၁၅ ရက်နေ့အထိ ပျံသန်းပြေးဆွဲပေးခဲ့ကြောင်း သိရှိရ ပါသည်။
ထို့အပြင် စတင်တည်ထောင်ချိန် ၌ မြန်မာ့လေကြောင်းလိုင်းနှင့်ချိတ် ဆက်၍ အင်္ဂလန်၊ ပြင်သစ်၊ ဂျာမနီ ကဲ့သို့သော နိုင်ငံတကာမှလေယာဉ် ကြီးများတိုက်ရိုက်ဆင်းသက်ပျံသန်းမှု ရှိခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
"အရင်က ဒီမှာဒေသတွင်းနိုင်ငံ တွေကတင်မဟုတ်ဘဲ International flight အဖြစ်ကို BOAC ၊ Air French ၊ Lufthansa စတဲ့ လေကြောင်းလိုင်းက လေယာဉ်ကြီးတွေ တိုက်ရိုက်ဆင်းသက်ခဲ့ကြပါတယ်။ ဒီလိုနိုင်ငံတကာက လေယာဉ်တွေနဲ့ ၀န်ဆောင်မှုပေးနိုင်ဖို့ အစိုးရပိုင် လေကြောင်းလိုင်းမှာသာ right ရှိတာပါ"ဟု မြန်မာ့လေကြောင်းမှ တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးက ပြောပြခဲ့သည်။
"အရင်က နိုင်ငံတကာက လေကြောင်းလိုင်းတွေ ဒီကိုတိုက်ရိုက် ဆင်းသက်နိုင်ခဲ့ပေမယ့် နောက်ပိုင်းမလာတော့ဘူး။ နောင် Market လည်းရှိမယ်ဆိုရင် ပြန်ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။ ခရီးသွားလုပ်ငန်းလည်း တိုးတက်လာနိုင် တယ်"ဟု ခရီးသွားရေးရာ ကျွမ်းကျင်သူ တစ်ဦးက သုံးသပ်ပြောကြားခဲ့သည်။
မြန်မာ့လေကြောင်းလိုင်းသည် လက်ရှိတွင် ကမ္ဘောဇကုမ္ပဏီနှင့် ပူးပေါင်းကာ MAI အမည်ဖြင့် ရန်ကုန်မှ ဘန်ကောက်၊ စင်ကာပူနှင့် ကွာလာ လမ်ပူခရီးစဉ်များကို ပြေးဆွဲပေးနေပြီး မြန်မာ့လေကြောင်းလိုင်းအနေဖြင့် မူ ပြည်တွင်းခရီးစဉ်များကိုသာ ပြေးဆွဲပေးလျက်ရှိကြောင်း သိရသည်။
ထို့ကြောင့် (၆၂)နှစ်ပြည့်မြောက် တော့မည်ဖြစ်သည့် မြန်မာ့လေကြောင်းမှ ခရီးသည်များအတွက် ၀န်ဆောင်မှုများတိုးမြှင့်ပေးခြင်း၊ လေ ကြောင်းဆိုင်ရာ Training များပေးခြင်း၊ လေကြောင်းပို့ဆောင်ရေးမှ လေ ကြောင်း စီးပွားရေးအသွင်သို့ ရောက်ရှိနိုင်ရန် ဆောင်ရွက်ခြင်းနှင့် ပြည်တွင်းခရီးစဉ်မှ ဒေသတွင်းခရီးစဉ်၊ ထိုမှ နိုင်ငံတကာခရီးစဉ်အထိပါ ပြုလုပ်သွားရန်ရှိကြောင်း အဆိုပါတာဝန်ရှိ သူက ဆက်လက်ပြောကြားခဲ့သည်။
"ခရီးသည်ဝန်ဆောင်မှုအနေနဲ့ လေယာဉ်တင် အစားအသောက်ပိုင်း မှာလည်း ပိုပြီးစနစ်တကျလုပ်ဆောင် ပေးမယ်။ ပြီးတော့ Limousine service လို့ခေါ်တဲ့ လေယာဉ်စီးဖို့ လာတဲ့အချိန်ကနေ စီးပြီးလို့သွားမယ့်နေရာ ရောက်တဲ့အထိပေးတဲ့ ၀န်ဆောင်မှုကို လုပ်သွားဖို့ရှိတယ်။ Pilot Training၊ Engineering Training၊ Commercial Training အနေနဲ့ e- ticketing Online စနစ်တွေ လုပ်ပေးသွားဖို့ရှိတယ်။ လေယာဉ်စင်းလုံးငှားမှုတွေလည်း တိုးပြီး လုပ်ဖို့ရှိတယ်"ဟု ၎င်းက ထပ်မံပြောပြခဲ့သည်။
မြန်မာ့လေကြောင်းလိုင်းသည် ဖော်ကာ F-28 ၊F-27 ၊ ATR-72 ၊ ATR-42 လေယာဉ်လေးစင်း ရှိပြီး MA 60 လေယာဉ်သစ်များ ၀ယ်ယူ၍ ပြေးဆွဲသွားရန်ရှိကြောင်း သိရှိရသည်။
source : Weekly Eleven
Choose font here
2009 Myanmar Thingyan Alaungdaw Katapha Bicycle Travel Blog Cartoons Donation Trip ECO Tourism Environmental and Animals Funny Knowledge Myanmar News poem Remembrance Technology Travel Malaysia Travel Myanmar Travel News Travel Singapore Travel Thailand Traveler Videos
Proxies to read Blogspot
ကိုညီလင်းဆက်ဆီကရတဲ့ Proxy Link လေးတွေပါ အားလုံးအဆင်ပြေမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်။ ဘလော့ဂ်တွေကို တော်တော် ပိတ်ထားတာ တွေ့ရတယ်။ ပရောက်ဆီတွေလည်း သ...
လိပ် ၃ မျိုး တုံးလု အခြေအနေသို့ရောက်
မြန်မာနိုင်ငံတွင်သာ တွေ့နိုင်သော လိပ် ၆မျိုး ရှိသည့်အနက် ၃ မျိုးမှာ မျိုးတုံးမှုအန္တရာယ်နှင့် ရင်ဆိုင်နေရကြောင်း သိရသည်။ မြန်မာနိုင်ငံတွင်သာေ...
ကငျးပုံရတေံခှနျ (Kin Pon waterfall)
Kin Pon waterfall Unocode ရခိုငျပွညျနယျထဲက အေးခမျြးသာယာလှတဲ့ ဂှမွို့နယျလေးဟာဖွငျ့ လှပသော သဘာဝကမျးခွမြေားအပွငျ ရခိုငျရိုးမကွီးနှငျ...
တောရိုင်းတောင်ရိုင်းကြားထဲက နိဗ္ဗာန်ဘုံ သို့မဟုတ် ကယော (ဟိုယာ) ဒေသခရီးကြမ်း
မြန်မာပြည်ရဲ့ ပထမဆုံး ကယောဒေသ ခရီးသွားနယ်မြေသစ်ဆိုပြီး YAW 45 Environment Tour Family က စီစဉ်ပေးနေတဲ့ တောရိုင်းတောင်ရိုင်းကြားထဲက နိဗ္ဗာန်ဘ...
ကမ္ဘာ့ဘဏ်သို့ အင်းလေးကန် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေး အဆိုပြုလွှာ တင်သွင်းမည်
နာမည်ကျော် အင်းလေးကန် ရေရှည်တိုးတက်စေရန်နှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးအတွက် အဆိုပြုလွှာ ( Proposal) ကိုကမ္ဘာ့ဘဏ်သို့ အင်းလေးကန် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်...
ဓမ္မစေတီ ခေါင်းလောင်းကြီး ရှာပုံတော် ရေရာသေချာရဲ့လား
လွန်ခဲ့သည့် နှစ်ပေါင်း ၄၀၀ ခန့်က အမြင့် ၁၂တောင်၊ အ၀ ခုနစ် တောင်၊အလေးချိန် ပိဿာ ၁,၈၀,၀၀၀ ရှိသော ခေါင်းလောင်းကြီး တစ်လုံး မြစ်သုံးခွ ဆုံတွင...
မန္တလေး သမိုင်းဝင် စက်ရှင်တံတားကို ဖြိုဖျက်
မန္တလေးမြို့၏ သမိုင်းဝင် ရှေးဟောင်း အမွေအနှစ် တခုဖြစ်သည့် လွန်ခဲ့သည့် နှစ်ပေါင်း ၁၅၀ ခန့်က တည်ရှိခဲ့သော “စက်ရှင်တံတား” ခေါ် “စည်ရှည်တံတား” ကု...
တိုင်းရင်းသား များ၏ ဘ၀နှင့် အလှ ကို ဖော်ကျူး သည့် SPLENDOUR LAND စာအုပ် နိုင်ငံတကာ အဆင့်မီ ပုံနှိပ်ပြီး
မြန်မာနိုင်ငံ ၌ တိုင်းရင်းသား မျိုးနွယ် စုပေါင်း ၁၀၀ ကျော် ရှိသည့် အနက် အချို့ မှာ ထူးခြား လေးနက်သော သဘာဝ ရှိပြီး တောင်တန်း နေမျိုးနွယ်စု ...
မြန်မာနိုင်ငံ အထက်ပိုင်း ဘုရားဖူး ခရီးစဉ်တွင် စစ်ကိုင်းတိုင်း ဒေသကြီး မြောင်မြို့ ဆင်ခေါင်းတောင်ရှိ ကျောက်နဂါး ပါဝင်လာ
စစ်ကိုင်းခရိုင် မြောင်မြို့ ဆင်ခေါင်းတောင်ရှိ ကျောက်နဂါးသည် မြန်မာနိုင်ငံ အထက်ပိုင်း ဘုရားဖူးခရီးစဉ်များတွင် မန္တလေးမြို့ နှင့်အနီးတစ်ဝိုက...
မုံရွာခရိုင်၊ ကနီမြို့နယ်အတွင်း တည်ရှိသော အလောင်းတော်ကဿပ ဒေသသည် မုံရွာမြို့ တစ်ဘက်ကမ်း ညောင်ပင်ကြီးဆိပ်မှ မိုင် (၆ဝ) ကျော် ကွာဝေးပါသည်။ ယခုန...
2009 Myanmar Thingyan
Environmental and Animals
ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံး ကျားထိန်းသိမ်းရေးနယ်မြေ ဖြစ်သည့် ဟူ...
ဆိုက်ရောက်ဗီဇာ လျှောက်ထားမှုကို ခရီးသွား လုပ်ငန်းရှ...
မြန်မာနိုင်ငံတစ်ဝန်း ယဉ်ကျေးမှု အမွေအနှစ်ဇုန် ၅ ဇုန...
ကမ္ဘာ တစ်ဝန်းရှိ ဟိုတယ် များကို မိမိ နေအိမ် online ...
မြန်မာသံရုံး မရှိသောနိုင်ငံမှ နိုင်ငံသားများကိုသာ ...
မြန်မာ့လေကြောင်းလိုင်း၏ နိုင်ငံတကာ ခရီးစဉ်များ ပြန...
ကမ္ဘာ့ဘဏ်သို့ အင်းလေးကန် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေး အဆြို...
ဟိုတယ်ကြီးအချို့ ကန်ဒေါ်လာကိုသာပြောင်းလဲ သုံးစွဲတော...
ရန်ကုန်မြစ် သုံးဆိုင် အတွင်း နစ်မြုပ်နေသာ ဓမ္မစေတီမ...
ဓမ္မစေတီ ခေါင်းလောင်းကြီး ရှာပုံတော် ရေရာသေချာရဲ့လာ...
Asian Traveler. Travel theme. Powered by Blogger.